Nagu saabsan - Jiangyin Xinlian Alxanka Qalabka Co., Ltd.
Shirkaddu waxay leedahay awood farsamo oo xoog leh, qalab casri ah, qalab tijaabo oo dhameystiran, waxayna uruurisay sannado badan oo waayo-aragnimo soo-saar ah. Iyadoo loo marayo hal-abuurnimo madax-bannaan, shirkaddu waxay si isdaba-joog ah u hagaajinaysaa habka wax-soo-saarka waxayna kordhisaa heerka kormeerka fulinta si loo hubiyo kalsoonida iyo xasilloonida tayada wax soo saarka. Sanadihii la soo dhaafay, shirkaddu waxay si isdaba-joog ah u soo bandhigtay dhowr qalab otomaatig ah oo tiknoolajiyadeed ah, iyadoo si weyn u wanaajinaysa wax-soo-saarka wax-soo-saar iyo karti, iyo sii xoojinta awoodda guud ee shirkadda.
Tan iyo markii la aasaasay shirkadda, waxaan ku takhasusnay soo saarista taxane kala duwan oo ah MIG / MAG toosh, alwaaxyada alxanka ee TIG, shuclada jarista hawada plasma iyo qaybaha dayactirka. Waxyaabahayagu waxay dhaafeen shahaadada CE, shahaadada RoHS, noocyo dhammeystiran iyo qeexitaanno, tayo sare iyo qiime tartan leh. Iyada oo tayo sare leh iyo adeeg kaamil ah, shirkaddu waxay ku guuleysatay aqoonsi ballaadhan iyo ammaan loo dhan yahay oo ka timid macaamiisha. Wax soo saarkooda si wanaagsan ayaa loogu iibiyaa in ka badan 50 dal iyo gobol, waxayna abuurtay iskaashi istiraatiijiyadeed oo muddo dheer ah shirkado badan oo caan ah.
Shirkaddu had iyo jeer waxay hirgelisaa mabaadi'da "tayada ugu horreysa, marka hore macmiilka", si adag ayay u xakameysaa tayada, waxay u hoggaansantaa jihada istiraatiijiyadeed ee horumarka ee "ku badbaada tayada, kuna kobcisa hal-abuurnimo", shiraac oo horay u sii socotaa, macaamiil badana u keentaa baaxadda wax soo saarka iyo khibradda isticmaale ee ka sii wanaagsan.
"Raadinta heer sare waa mid aan dhammaad lahayn, iyadoo lagu sii socdo waqtiyada lana abuurayo mustaqbalka", waxaan rajeyneynaa inaan kula shaqeyno si aan wadajir ugu hormarno xaalad guul-guul ah!